Gịnị smart mgbaaka ịzụta inye na Christmas | Akụkọ akụrụngwa
Ekeresimesi na-abịa. Ọ bụrụ n ’ị chere na oge eruola kwụsị inye sọks, agbatị, colognes na uwe ime Na mkpokọta, ihe ha na-enye anyị oge niile anyị na-enye ha n'oge a n'afọ, mgbaaka na-agbakọ ọnụ nwere ike ịbụ nhọrọ magburu onwe ya iji tụlee.
Nke mbu, anyi aghaghi ido anya banyere ihe di iche na mgbaaka na-ese ihe na smartwatch. Ezie ejiri wristbands rụọ ọrụ iji nyochaa ọrụ anyị kwa ụbọchị na oge niile na-enweghị nkwupụta ọ bụla, ọ bụ ezie na e nwere ụdị zuru oke, smartwatches na-eme otu ihe ahụ na atụmatụ ndị ọzọ, ihuenyo na ọnụahịa dị elu karị.
Igwe ihuenyo buru ibu smartwatches na-enye gị ohere ịme ụfọdụ ngwa na ngwaọrụ n'onwe ya na mgbakwunye na ịza oku na ozi sitere na ngwa izipu ozi ejiri. Ọzọkwa, Gụnyere GPS ya mere ha na-enye anyị ohere ịchụso egwuregwu anyị na-eme n'èzí.
Mmachi ọzọ nke smartwatches bụ ndụ batrị, nke ọtụtụ mgbe anaghị agafe awa 24. Nke a bụ n'ihi, n'otu aka, na eziokwu nke ọtụtụ n'ime ngwaọrụ ndị a na-ejikọta ihuenyo OLED ebe enwere ike igosi ụdị ihe oyiyi ọ bụla, ogologo ederede na ndị ọzọ. Ihe ọzọ kpatara ya bụ iji GPS eme ihe mgbe niile.
Iji mechie ntụnyere ahụ ka ị wee nwee ike doo anya na ọdịiche dị n'etiti quantifying mgbaaka na smartwatch, anyị ga-elele ọnụahịa ahụ. Mgbe mgbaaka ndị na-atụle ọrụ egwuregwu anyị, anyị nwere ike ịchọta ha site na 30 euro, ezigbo smartwatches (ọ bụghị Chinese knockoffs) na-amalite kacha mma site na 100 euro.
2 Na-asọpụrụ Band 5
3 Samsung Galaxy Kwesịrị ekwesị e
4 Fitbit Na-akpali HR
Ọ bụ ezie na ọ bụ ihe nlereanya kacha mara amara n'ahịa, Ekpebiri m itinye ya n'ọnọdụ nke mbụ ebe anyị ga-ewere ya dị ka ntụnye aka gbasara ụdị ndị ọzọ anyị ga-akwado n'isiokwu a.
Ọgbọ nke anọ nke My 4 Band m n'ikpeazụ ịmụta a agba ngosi na ntutu buru ibu karịa ndị bu ya ụzọ, kpọmkwem 0,95 sentimita asatọ. Ọ na-enye anyị ohere ịnata ọkwa nke ozi abụọ na oku anyị natara, mana site na ijikọ igwe okwu, anyị enweghị ike ịza oku ma ọ bụ ozi.
Dị ka onye nrụpụta si kwuo, batrị nke Mi Band 4 ruru ụbọchị 20, ọ bụ ezie n'ezie ọ karịa izu 2. O nweghi mgbawa GPS, ihe a na-ahụkarị maka ịkọwa ọla aka n'ihi ọnụahịa ha na batrị ha chọrọ.
Ọ bụghị naanị na ọ na-enyocha ọrụ ahụ anyị kwa ụbọchị dịka ebe dị anya anyị gara, usoro, calorie anyị gbara ọkụ ... kamakwa nyochaa obi anyị na arịrịọ onye ọrụ anaghị akpaghị aka dịka ndị ọzọ na-eme.
Edere data niile na ngwa Mi Fit, ngwa dakọtara na iOS na gam akporo. Tụfuo IP68 asambodo na submersible ruo 50 mita.
Nlereanya anyị nwere ike ịchọta ma na Europe ma na Latin America bụ ụdị ahụ enweghị NFC mgbawa ya mere, anyị enweghị ike iji ya kwụọ ụgwọ maka mgbaaka anyị.
Xiaomi Mi Band 4 dị ọnụ ahịa na Amazon nke 32,99 euro.
Nke abụọ kacha mma nhọrọ anyị nwere na anyị nwere na ahịa na-abịa site n'aka Hauwei na Na-asọpụrụ Band 5. Mgbaaka a dị ntakịrị karịa Xiaomi Mi Band 4 na na-enye anyị ihe dịka otu uru ahụ, gụnyere ihuenyo OLED 0,95 nke anụ ọhịa.
Agbanyeghị, anyị hụrụ ọdịiche dị mkpa nke nwere ike igwu egwu ma na-emegide gị, dị ka nnwere onwe nke dị ụbọchị 4 ruo 5 na ọbara oxygen ogo mmesho, otu atụmatụ nke ama ama ama ama Samsung nyere afọ ole na ole gara aga, mana ọ pụọ n'anya.
Dị ka Mi Band 4, o nweghi mgbawa GPS, yabụ anyị chọrọ ama anyị iji soro ụzọ anyị n'èzí mgbe anyị na-aga maka ịgba ọsọ, igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ naanị ịgagharị. Ọ naghị ekwe ka anyị kwụọ ụgwọ site na NFC ebe ọ bụ na ọ nweghị mgbawa a.
The Honor Band 5 dị maka 32,99 euro na Amazon.
Samsung Galaxy Kwesịrị ekwesị e
Samsung abanyela n'ahịa maka ịkọwa ọnya aka site na Galaxy Kwesịrị ekwesị e, mgbaaka na oji na acha ọcha. Ihe nlere a na-enye anyị ohere ịkọwapụta ihe egwuregwu anyị niile na-akpaghị aka gụnyere oke obi, usoro, usoro ụra ...
Isi uru ya na ndị ọzọ nke ụdị Xiaomi na Honor bụ na ọ na-eguzogide uzuzu, mmiri na ujo. dịka ụkpụrụ ndị agha si dị. O nweghi mkpirisi GPS iji soro ihe omumu anyi ma obu NFC.
Batrị ahụ ruru ụbọchị 4-5 nke nnwere onwe yana ozi nke ngwaọrụ a na-edeba aha nwere ike ịchọta na ngwa Ahụike Samsung, otu nke kasị mma ngwa site na ikikere site na Garmin.
Samsung Galaxy Fit 3 dị ọnụ na Euro 29 na Amazon.
Fitbit Na-akpali HR
Fitbit bụ otu n'ime ndị agha laworo n'ụwa nke atụ ọla aka. Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ha adịghị ọnụ ala, etu esi enye anyị ihe na ozi enyere anyị Anyị agaghị ahụ ya na ụdị Xiaomi na Honor.
La Fitbit Na-akpali HR na-enye anyị obodo kwụụrụ onwe nke ụbọchị ise zuru ezu, site n'oge ruo n'oge na-enyocha mkpụrụ obi dị ka nzọụkwụ, ogologo njem, nkeji nke ọrụ. Ọ nwere ike ịchọpụta ụdị egwuregwu anyị na-eme iji nyochaa ya na-akpaghị aka.
O nweghi mgbawa GPS, ya mere, ọ bụghị ike nyochaa n'èzí mmega-enweghị iji anyị ama. Dị ka Mi Band 4, ọ na-enye anyị nhọrọ nhazi dị iche iche mgbe ị na-eji eriri agba dị iche iche.
Fitbit Inspire HR dị ọnụ ahịa 79,90 euro na Amazon
Garmin bụ otu ihe nwere ogo na ogologo oge mgbe ọ na-atụle ngwaọrụ. Na Gamin Vivosport bụ otu n'ime ole na ole quantifying ọla aka na nwere mgbawa GPS iji soro mmega ahụ anyị n'èzí, ya mere ọ dị mma maka ndị hụrụ egwuregwu n'anya, ebe ọ bụ na ọ dịghị mkpa iji ekwentị na-apụ.
Ihe mgbawa GPS na-ahụ maka ịdekọ ma ụzọ ọ ga - esi mee ka ọ gaa njem njem na ọsọ ọsọ site na ngwa dị egwu ọ na - etinye anyị, otu n'ime ndị kasị mma na ahịa.
Dị ka ezigbo mgbaaka, ọ na-emekwa ka anyị mata calorie anyị na-ere ọkụ, na-enyocha ụra anyị ma na-enye anyị ozi na oke ikuku oxygen n'ime ọbara.
Garmin Vivosport dị ọnụ ahịa 101,99 euro na Amazon
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwaọrụ yi » Gịnị smart mgbaaka ịzụta inye na Christmas
Amazon ikwughachi 3rd Ọgbọ, Anyị na-enyocha The Big New ikwughachi